Qaccarrii - BBC News Afaan Oromoo
'Hojii yeroo biraaf dabarsuu' ykn dhibaa'ummaaf furmaata saddeet
Hojii tokko yeroo biraaf dabarsuun namoota hedduu biratti ni mul'ata. Garuu hojii yeroo biraaf dabarsaa deemuun dhiphina hamaa keessa nama galcha. Rakkoon akkanaa isin mudateera yoo ta'e maloota saddeettan ittiin irra aanuun danda'amutu jiru.
Itoophiyaan hojjettoota leenji'an biyyoota Arabaan dabalataan, gara biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaatti erguuf qophaa'aa akka jirtu beeksifte.
Gaaffiifi deebii qaccarriif taasifamu dura wantoota beekuu qabdan
Waggoota dheeraaf erga barattaniin booda damee ittiin leenjitaniin hojii argachuuf baayyee rakkattu ta'a. Kana malees, dhaabbileen qacaran maal akka barbaadan hubachuu dhiisuun immoo dhimmicha cimsa.
14 Caamsaa 2019
"Hojiin dhala namaa ajjeesaa jira"
Dhiphinnii fi sa'aatii dheeraa hojjechuun Ameerikaa keessatti waggaatti nama 100,000 ajjeesaa jira jedha pirofeesarri Yuunivarsitii Istaanfoord Jefireey Feefar.
Fayyaa: Wantoota biiroo keessatti nama si'eessan shanan
Guyyuu teessuma keessan irra ooltuu? Mee qabxiiwwan biiroo keessatti isin si'eessuuf gargaaran kanneen mil'adhaa.
Dargaggoota qarqara galaanaa Naayjeriyaatti namoota farda gulufsiisuun hojii uummatan
Teeknolojiin hojii koo bakka bu'uu danda'a yaaddoo jedhu qabduu? Hojiiwwan torba teeknoliijiin bakka namaa bu'e hojjetu kunooti.
Qoccarrii hojii: Qabxiilee tibba qormaata hojii irratti gochu hinqabaannee
Yeroo tokko tokko tibba gaaffiifi deebii hojiif mindeefamuun taasifamu waan hineegamne umamuu mala. Fakkeenyaaf yoom boqonnaa akka baatan, bilbila kan dubbisa, waa'ee ogganaa saanii duraa waan hamaa kan dubbatan ni jiru.
Mormiin hojii dhaabuu eenyuuf eyyamama? Eenyufimmoo dhorkama?
Hojjetaan tokko sababa mormiisaanii hojii dhaabuun agarsiisan, yakkaan gaafatamuu danda'uu?
5 Fuulbaana 2018
Qormaata cimaa Chaayinaa biyyoota Lixaatti bulchiinsa cimaa fide
Nama hojii hojjetu mindeessuf takka takka isa/ishee beekuun yerootti barbaachisu ni jiraata. Jarri Chaayinaa garuu jaarraa 19ffaatti yaada impaayera Biritish gargaare qabu turani.
Mootummaan Itoophiyaa paarkiiwwan industrii ijaaruutti waan ko'oommatee fakkaata. Kaayyon isaa inni mummeen hojii dhabiinsa hir'isuufi gama maanufaakchariingitiin sadarkaa biyyaattii fooyyeessuudha. Dhuguma kun ta'aa jiraa?
Dubartii biyya Hindii rifeensa sirreesitu
Jireenyaa mo'achuuf jedheen hojii aadaa keenyaan hin baramne hojjeechuuf murteesse jetti aadde Shantaabaay Yaadaav.
17 Amajjii 2018
Rippabliika giddugaleessa Afrikaa: Biyya barsiisonni keessa hin jirre
Waraana biyya rippablika jiddugaleessa Afrikaa jiru irraan kan ka'e barsiisonni cal jedhanii baduu isaaniin maatiin hojii barsiisummaa itti darbanii barachaa jiru.
Chaayinootii biyyoota Afriikaa heedduu keessatti hojiiwwan damee garaa garaa keessaatti hiraamaa akka jiran ni mulatu. Keessattuu dameen ijaarsaa kan isaan ittin heddu beekamaniidha. Oduun tibbana gara Zaambiyaatiin dhagame garuu heedduun dinqiidha jedhameera.
Iddoo hojii yoo xiqqaate sa'aatii 8 itti dabarsitanitti hoogganaa akkamii barbaaddu?
Namoonni adduunyaa bakka gara garaa jiraatan hoogganaa akkamii akka barbaadan nutti himanii jiru. Isin kan akkamiitu isinitti tola?
Onnachiiftuuwwan hojii maal fa'i beektu?
Kunneen onnachiiftuuwwan hojii gaggaarii ta'uu hin oolan.
Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa miiliyoona walakkaa ta'an waliin yoo madaalamu kun lakkoofsa xiqqaa dha. Hojettoonni of saaxiluu didanii ragaan sobaa harkatti qabame seera dura dhaabachuufi
Rakkoo dhiphina tiraafikaa baqachuun guyyaatti km 2 bishaan daakee gara hojii isaa deema,
Namichi lammii Jarmanii magaalaa Muniik kun rakkoo dhiphina tiraafikaa baqachuun guyyaa guyyaan km 2 bishaan daakuun gara hojii isaa deema